Raad Raac News Online – Madaxwayne Faroole iyo shirkada dhisaysa Garoonka Bosaso oo maanta hawlo sahmin ah ku tagay Madarka Bosaso.
Madaxwayne Faroole iyo shirkada dhisaysa Garoonka Bosaso oo maanta hawlo sahmin ah ku tagay Madarka Bosaso.
Bosaso Office December 10, 2012 0
waxaa manta garoonka diyaaradaha Ee Magalada Bosaso kulan ku qaatay shirkada loo xilsaaray dhismaha garoonka Bosaso iyo madaxwaynha Puntland C/raxmaan Faroole waxaana sidoo kale garoonka ku sugnaa injineerada sahminayay dhisida Ranwayga garoonka ka socday UNPOS .
sidoo kale waxaa goobta kusugnaa xubno ka tirsan Golaha Xukuumada Puntland isimada Gobolka Bari ganacsato iyo dad waxgarad ah .
dhisida garoonkani ayaa loo xilsaaray Hay,ad Talyaani ah kuwasoo dhawaan bilaawi doona howlahooda shaqo .
Madaxwayne Faroole oo goobta la hadlay ayaa ugu horayn waxaa uu faafaahiyay mashruuca garoonka Boaso lagu dhisidoonaan shirkad laga leeyahay dalka talyaaniga qarashka ku baxayana ay Dawlada Talyaaniga ku deeqday .
Madaxwayne faroola ayaa shacabka iyo Ganacsatada ugu baaqay in ay ka qee qataan dhisida Garoonka waxaa uuna sheegay in garoonka uu muhiim u yahay dhaqalaha Dalka waxaa uuna sheegay in dawlada ay doorkeeda ciyaaridoonto.
Sidoo kale waxaa isna Goobta ka hadlay Mas,ulka ka socda UNPOS waxa uuna sheegay in aad ugu faraxsanyahay in uu yimaado Puntyland waxaa uuna intaasi raaciyay in mshruucani uu yahay mid hormar u ah Puntland tasoo ka timid buu yiri Dawlada Talyaaniga iyo puntland lacgtiina ay diyaar ay tahay .
Ganacsatada ,isimada,golaha xukuumada iyo nabdoonada ay sidiiran u soo dhaweyay waxaa ayna balan qadeen in ay ka qeeb qaadan doonaan mashruucani .
Isimada ganacsatada iyo nabadonada kusugan halkaani ayaa si diiran u soo dhaweyay mashruucan lagu dayactiray madarka bosaso .